'Kendall, Hailey, ary Selena?': Nanao fihetsiketsehana ireo mpankafy satria i Jordan Clarkson dia niteraka an'i Selena Gomez mampiely tsaho miaraka amina emoji am-po - Pop-Kolontsaina
'Kendall, Hailey, ary Selena?': Nanao fihetsiketsehana ireo mpankafy satria i Jordan Clarkson dia niteraka an'i Selena Gomez mampiely tsaho miaraka amina emoji am-po
29 taona Selena Gomez mety manana olon-tiana vaovao. I Jordan Clarkson ilay olona. Tsy manambady izy amin'izao fotoana izao fa ny anarany dia nifamatotra tamin'ny olona fanta-daza. Selena dia nampifandraisina tamina anarana malaza maro toa an'i Justin Bieber, Orlando Bloom, Nick Jonas, Taylor Lautner, ary The Weeknd.
Gaga ireo mpankafy vao tsy ela akory izay rehefa naneho ny fitiavany an'i Selena Gomez tao amin'ny mpilalao basikety malaza Jordan Clarkson Twitter . Nisy ny tsaho fa mety mampiaraka i Jordania sy Selena.
Jordan dia nizara horonantsary an'i Selena izay ahita azy amin'ny lobaka San Antonio Spurs. Selena dia mpankafy basikety goavambe ary manohana ny Spurs. Ny emojian'i Jordania dia emoji-po mena fotsiny. Mety ho fambara iray io fa tiany i Selena na mety mampiaraka ry zareo. Nahazo valiny lehibe tao amin'ny Twitter ny vaovao. Ireto misy fanehoan-kevitry ny mpankafy vitsivitsy.
vao nahita an'i jordan clarkson nandefa emoji am-po ho an'i selena gomez pic.twitter.com/c7NgX2o1Zs
dr.seuss saka ao amin'ny satroka satroka
- dominooch (@BigDominooch) 22 Jolay 2021
Iza i Jordan Clarkson ary mampiaraka amin'i Selena izy?
- elena 🦋 (@loveforfarmiga) 22 Jolay 2021
Jordanian'i clarkson mampiaraka amin'i Selena Gomez ??? https://t.co/h69bu21ePR
- LeSwaggyBron 23🇵🇭 (@valkybron) 22 Jolay 2021
Jimmy Butler dia mety hanana zavatra holazaina amin'i Jordan Clarkson aorian'izany. https://t.co/clrMBwtQeX
- Heat Nation (@HeatNationCP) 23 Jolay 2021
Midina aho a @Selena Gomez & @JordanClarksons
- arina (@coalmurdock) 22 Jolay 2021
Selena Gomez ho avy ve ny ankizy filipino 1/4?
- james (@ L3BR0NJ4MES) 22 Jolay 2021
Clarkson Selena >>> Butler Selena
- 𝕷𝕰𝕹𝔪𝔢𝔦𝔰𝔱𝔢𝔯⁶𓅓 (@ LenBron_27) 22 Jolay 2021
Tena nitifitra ny tifitra nataony tamin'i Selena Gomez ity lehilahy ity tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra Twitter ho an'ny daholobe? @JordanClarksons
- Valley Boy (@Tylehrr) 22 Jolay 2021
Miala tsiny aho fa nilatsaka fotsiny i Jordan Clarkson fa izy sy Selena Gomez dia mampiaraka satria ara-bakiteny Lehibe raha marina aho, dia hivady amin'ny mariazy izao. https://t.co/NGrBXbR6H5
- Briana (@justbeingbeans) 22 Jolay 2021
Misaotra anao nandoa ny trosan'ny mpampindram-bolan'ny mpianatro. @JordanClarksons , lehilahy tsara ianao ary @Selena Gomez tsara vintana ny mampiaraka aminao
- Mango Gambino, PHD (@mangogambino) 23 Jolay 2021
Selena Gomez sy Jordan Clarkson mbola tsy namaly ireo bitsika ireo. Samy tsy nanamafy tamin'ny fomba ofisialy ireo tsaho niarahana.
Vakio ihany koa: 'Tafontrano maimaimpoana isaky ny voadidy?': David Dobrik dia nanambara ny orinasany pizza manokana, 'Doughbriks,' ary tsy faly ny internet.
Tantaran'ny Jordan Clarkson
Ny fanavaozam-baovao farany dia milaza fa mpitovo i Jordan Clarkson. 29 taona izy ary nilaza i CelebsCouples fa efa nanana fifandraisana dimy izy. Tsy nifamofo mihitsy izy.
Jordan Clarkson dia nifandray tamin'i Kendall Jenner, Chantel Jeffries, Chanel Iman, ary Bella Hadid. Ny tsaho milaza fa nifandray tamin'i Hailey Baldwin izy. Ny pitsopitsony momba ny fiarahan'i Jordania dia tsy mitovy amin'ny toerana rehetra.
Notaterina tamin'ny volana martsa 2020 fa nifandray tamin'ny maodely Ally Rossel i Jordan. Ally no sakaizan'i Lonzo Ball taloha.
- Jordan Clarkson (@JordanClarksons) 22 Jolay 2021
Jordan Clarkson dia teraka tamin'ny 7 Jona 1992, tany Tampa, Florida. Ny ray aman-dreniny, Mike Clarkson sy Annette Tullao Davis, dia Afrikanina-Amerikanina ary ny reniny dia fianakavian'i Filipina antsasak'adiny. Ny ray aman-drenin'i Jordan dia nanompo tao amin'ny tafika an'habakabaka amerikana ary nisaraka fony kely i Jordania.
Nandritra ny nanatrehany ny lisea Karen Wagner High School tany San Antonio dia nahazo isa 10 isa isaky ny lalao izy ary nahazo fanamarihana tamim-boninahitra ny fanomezam-boninahitra ny distrika rehetra. Nanao sonia taratasy nasionaly fikasana izy tamin'ny taona 2009 mba hilalao baskety any amin'ny oniversite ao amin'ny Oniversiten'i Tulsa.
ny fomba hifindrana amin'ny fifandraisana tsy misy fanidiana
zavatra tokony hatao rehefa eo amin'ny sambo ianao
iza i kristen stewart manambady
ny fomba hiainana izao
manoratra taratasy ho an'ny olona tianao
famantarana ny mangidy amin'ny fifandraisana